Amaqhinga okuzoba: amacebiso angcono kunye namaqhinga okufunda ukuzoba | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | | ngokubanzi, Amaqhinga
Umzobo uhlala ufikelela kubantu abambalwa kakhulu, enyanisweni ubuchule bokuzoba bubuchule obufuna iminyaka kunye neminyaka yokulandelwa kunye nokuziqhelanisa. Noko ke, bakho abanye abantu abazelwe benomoya wobugcisa nabakwaziyo ukwenza imizekeliso ebangel’ umdla.
Kule post asizange size kuphela ukuthetha nawe malunga nokuzoba okanye ubugcisa bokudweba, nantoni na ofuna ukuyibiza ngayo, kodwa kwakhona. ukukunika iingcebiso kunye namaqhinga ukuze, ngale ndlela, umzobo awuyi kuba yingxaki kuwe. Ukuba ufuna ukufunda ukudweba, siyakukhuthaza ukuba uhlale ukhangele okanye ubeke ingqalelo, kuba ngokuqinisekileyo uya kuba nomdla wokwazi oko kulele emva komzobo omhle.
1.1 umzobo iintlobo
2 Amaqhinga okufunda ukuzoba
2.1 Bukela izifundo kwaye ufunde
2.2 Ixesha ligolide
2.4 Fumana amandla
2.5 Yiba nomfanekiso-ngqondweni wendawo okuyo
2.6 Musa ukudimazeka
2.7 ilayibrari yakho ilungileyo
Umzobo ichazwa ngokungekho ngaphezulu okanye ngaphantsi njengobuchule okanye ukuziqhelanisa nokuzoba. Xa sizoba, sibuyisela uhlobo lomfanekiso kwinkxaso edla ngokuba yiphepha okanye i-canvas. Umzobo wazalwa ngenjongo yokuba yindlela yokubonakalisa umzobo kwaye yinxalenye yento esiyaziyo njengobugcisa obubonakalayo. Umzobo awukhange ube yinxalenye nje yendlela yokutolika, kodwa unxibelelwano. Kwaye ukwazi eli gama kufuneka sibuyele amawaka kunye namawaka eminyaka, ngakumbi kwixesha langaphambi kwembali, xa i-cavemen yazoba uthotho lweesimboli ukuze ikwazi ukunxibelelana.
Akuthandabuzeki imizobo yeza ehlabathini ngeenjongo zokuvuselela ulwimi oluthethwayo ngolwimi oluthe cwaka, olufutshane nolushwankathelweyo.. Ulwimi, njengoko sesichazile ngaphambili, ludlule kwimbali yoluntu kwaye lukwazi ukubhenela kwiimvakalelo ezininzi, iingcamango, iimvakalelo kunye neengcamango. Yingakho umzobo uhlukaniswe ngamacandelo amaninzi kwaye nganye ineempawu ezahlukeneyo. Emva koko, sizicacisa ngokufutshane.
Umzobo wobugcisa ngumzobo apho zonke iimvakalelo zomculi zibanjwe kwi-canvas. Ngethuba lenkqubo yokudala umzobo, iinxalenye ezahlukeneyo kunye nezinto eziqhutyelwa ukuphuhliswa kwayo: imbono kunye nezinto eziphathekayo. Luhlobo lomzobo olufuna ukusetyenziswa kwezinto ezahlukeneyo, ngoko ke, kukho udidi olukhulu lweepensile okanye abamakishi abenzelwe naluphi na uhlobo lomzobo. Kumzobo wobugcisa, umgca wegraphic uthathwa njengeyona nto ibalulekileyo, njengoko kubaluleke kakhulu.
Umzobo wobugcisa usetyenziselwa ngokukodwa ukudala ukubonakaliswa kweendawo ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, zixhaphake kakhulu ukubona kwicandelo loyilo lwezakhiwo okanye kuyilo lwe-topographical. Ziyimizobo efuna ixabiso elibonakalayo apho imbono ikhona kakhulu. Ke ngoko, umyili kufuneka abe nolwazi olwaneleyo lokwazi nganye imilinganiselo yento. Kwakhona kugxininiswe ukuba umzobo wobugcisa uhlelwe kwiifom ezine okanye i-typologies: yendalo, eqhubekayo, yoshishino kunye nechazwe.
Umzobo ngokwawo ungahlelwa ngokwamanye amacandelwana amane: umzobo wokukhulelwa, umzobo wenkcazo, umzobo wokuvelisa okanye ekugqibeleni, umzobo wemizi-mveliso.
Amaqhinga okufunda ukuzoba
Kukho uluhlu lwamaqhinga okanye iingcebiso ezinokukunceda uphucule ubuchule bakho bokudweba, ezinye zazo zisenokubonakala zicacile kuwe, kodwa azithathelwa ngqalelo xa uqala njengomzobi kwaye zibaluleke kakhulu, kuba zenza. inxalenye yenkqubo kunye nophuhliso njengegcisa.
Bukela izifundo kwaye ufunde
Isenokungabi yinto enomdla kakhulu okanye iqhinga elibalulekileyo kuwe, kodwa i-85% yento oyizobileyo namhlanje yi-99% yayo yonke into oyibhale izolo. Eli binzana libaluleke kakhulu ukusetyenziswa, kuba bambalwa kakhulu abantu abakhetha ijelo lolwazi okanye inkuthazo. Sincoma ukuba ngaphambi kokuba uqale ukuzoba, gcina izibongozo zakho kuwe kwaye uzixhobise ngomonde ngaphambi kokubukela uthotho lweevidiyo eziya kukunceda ukuba uphefumlelwe kwaye uqalise. Ngaphezu kwakho konke, fumana ukuba ungaqala njani kweli hlabathi, zeziphi izikhokelo omele uzilandele kwaye zeziphi iingcebiso ezibaluleke kakhulu ukoyisa.
Yiyo loo nto sikukhuthaza ukuba uqalise uphendlo lwakho kwi-Youtube, uya kufumana amawaka kunye namawaka eevidiyo zokufundisa kunye neevidiyo ezivela kubabonisi abanesiqalo kwaye baya kukucebisa ngeyona ndlela ilungileyo.
Ixesha lisixhobo esiyinxalenye yobomi bethu kwaye yiyo yonke into. Okokuqala ixesha liyahamba. Yiyo loo nto kuyimfuneko ukuba uchithe ixesha losuku, malunga neeyure ezi-3 ukuya kwezi-4 yonke imihla. Akunyanzelekanga ukuba zilandelwe, unokwenza amaxesha okuphumla kwaye uqhubeke nemithambo yakho emva kweyure.
Into esizama ukukucebisa ngayo kukuba ungaze uyeke ukuzoba, kuba xa simisa inkqubo eye yangqamana, ingqondo yethu ikhululeka ngakumbi kunesiqhelo kwaye ithande ukungalibazisi. Ngenxa yesi sizathu, umzobo ngumsebenzi apho kufuneka i-evolution, kwaye i-evolution ithatha ixesha kunye neeyure zoqeqesho.
Ukudala ligama elivela kwintsingiselo yokwakhiwa kwento engazange yenziwe ngaphambili okanye ubuncinane bezama. Yiloo nto eyenzekayo xa uqala kwihlabathi lobugcisa, umzobi uvame ukudala. Ukwenza oku, kufuneka uzame kwaye ushiye uloyiko lwakho ngasemva. Uloyiko belusoloko luyinto engahambi nawona magcisa abalaseleyo. Ke ngoko, siyakucebisa ukuba ungoyiki ukwenza kunye nokulinga, zama ukwenza zonke izinto ezifika engqondweni yakho (ukuthetha ngobugcisa) kwaye uziqalise ukufumanisa into okwaziyo ukuyenza, kungoko uya kwazi ukuba loluphi uhlobo lomzobo olona lukulungeleyo.
Ukuphefumlelwa ngowona mhlobo ubalaseleyo wamagcisa, kuba yiyo yonke into eyenza ukuba benze kwaye bafezekise iinjongo ezintsha. Kodwa ukuze ufumane impembelelo kufuneka ufumane ulwazi, kwaye ayikuko ukuba sifuna ukukubhalela izicengcelezo zokuzonwabisa, kodwa sifuna ukuba uzibhale ngokwakho kwamanye amagcisa asebenza ngokwahlukileyo kwaye afanayo neembono zakho. Kukho amagcisa afumene imithombo yenkuthazo kwiiprojekthi okanye kwizinto ezibangqongileyo ezingenanto yakwenza nomzobo, basuka nje baguqule ingcinga baze bayiguqule ibe yimibono emitsha, beyilungelelanisa ngendlela efanayo.
Yiba nomfanekiso-ngqondweni wendawo okuyo
Imekobume yiyo yonke into esingqongileyo. Kule nto, kubalulekile ukuba siyithathele ingqalelo kwaye siyibone ngeso lengqondo, kuba sinokufumana iimpendulo kuyo. Amagcisa amaninzi xa eqala awazi ukuba azoba ntoni okanye aqale phi. Kubalulekile ukuba ushiye i-canvas okanye ishidi umzuzwana kwaye ujonge ngaphandle kwefestile okanye ukhangele ngeenxa zonke kuwe, naphi na apho ukhoyo.
Elinye icandelo lengcebiso efana nale kukuba uye kwindawo apho uziva ukhululekile ngenxa yezizathu ezahlukeneyo kwaye ubambe loo mvakalelo ngendlela entsha yokuzifumana. Le nkcukacha ibaluleke kakhulu kuba iya kuba yinxalenye yenkqubo ye-evolution yakho, kwaye khumbula ukuba i-evolution ifana nesangqa esingapheliyo. Xa kufuneka ubuyele umva, buyela apho ubukhona.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ukuzoba yinkqubo. Kuya kubakho iintsuku apho uya kufuna ukuzoba ungayeki, ingqondo yakho iya kugcwala imibono kwaye kuya kubakho iintsuku ongena kwinto amagcisa amaninzi abiza ibhloko yengqondo okanye ukuphazamiseka kwengqondo. Musa ukudimazeka xa oko kusenzeka kuba iqhelekile, yaye eneneni lelinye inqanaba. Into eyenzekayo kukuba njengoko iliqonga elingasincediyo, asidli ngokulinxulumanisa njengeqonga kodwa silinxulumanisa njengephupha elibi.
Xa unengxaki yengqondo buyela kwinkqubo efanayo kwaye uzibuze ukuba ukwazile njani ukuqhubela phambili. Kuloo mpendulo iya kuba zizo zonke iinkqubo oye wadlula kuzo kwaye akusayi kuba buhlungu ukukhumbula kwakhona kwaye udale imibuzo kunye neempendulo ezintsha. Ngaphandle kwamathandabuzo, ungakhathazeki malunga nesi sigaba, ke kuphela eyona ilungileyo iseleyo.
ilayibrari yakho ilungileyo
Bathi incwadi inokutshintsha ihlabathi, kwaye ingalindi kuba kukho iincwadi ezide zatshintsha ubomi. Yiyo loo nto sicebisa ukuba ufunde kwaye uzibhale ngokwakho nakwindawo ebonakalayo ebonakalayo. Akukho nto ifana nokuvula incwadi okokuqala, kuba yeyokuqala oya kuhlala uyikhumbula. Ke ngoko, khangela kwi-intanethi ezona ncwadi zifanelekileyo kwaye uye ngaphandle kokucinga okanye ngokufihlakeleyo kwithala leencwadi elikufutshane okanye kwivenkile ekufutshane nawe kwaye uyithenge.
Phanda, funda uze uzobe, akukho nto ingcono njengaleyo.
Umzobo bubuchule bobugcisa obuqhutywe amashumi eminyaka. Kangangokuba kufuneka sibuyele ekuqaleni kwembali yoluntu ukuze sazi amanyathelo ayo okuqala. Ke ngoko, sinethemba lokuba ezi ngcebiso sizicebisile zikuncedile ukuba ufunde kwaye zikukhuthaze ukuba ufune ukungena ngokupheleleyo kweli hlabathi.
Yonke imihla kukho amagcisa amaninzi adibanisa nomzobo kwaye ayiguqule ibe yimisebenzi yokwenene yobugcisa. Unokuba ngomnye wabo, qhubeka uvela kwaye ungaze uyeke ukuzoba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » amaqhinga ukuzoba
Izakhelo Zeempembelelo zasimahla